ရနျမဖွဈကွတဲ့အတှဲဆိုတာ မရှိလို့ လူမှု ကှနျယကျပျေါမှာ သာယာနတေဲ့ ခဈြသူ သမီးရညျးစားတှကေိုကွညျ့ပွီး အားမကြ သငျ့ကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ အသေငျခြိုဆှေ…. – Shwewiki.com
ရနျမဖွဈကွတဲ့အတှဲဆိုတာ မရှိလို့ လူမှု ကှနျယကျပျေါမှာ သာယာနတေဲ့ ခဈြသူ သမီးရညျးစားတှကေိုကွညျ့ပွီး အားမကြ သငျ့ကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ အသေငျခြိုဆှေ….
နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ အသေငျခြိုဆှကေတော့ အဆိုတျောတဈေ ယာကျအဖွဈသာမက သရုပျဆောငျတဈယောကျအဖွဈပါ အောငျမွငျခဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
အသေငျခြိုဆှကေ လကျရှိမှာတော့ သမီးလေး Ivy ကို ပွုစုပြိုးထောငျနရေ ငျး အနုပညာလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျနသေလို သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျး‌တှကေိုလညျး အခြိနျပေးလုပျကိုငျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
အသကျအရှယျတဈခုရလာတာ နဲ့အမြှ အခဈြရေးနဲ့ ပကျသတျပွီး အရငျကထကျ စဉျးစားခြ ငျ့ခြိ နျ တတျနပွေီဖွဈတဲ့ အေ သငျ ခြိုဆှကေ ဒီကနမှေ့ာလညျး လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ သာယာနတေဲ့ ခဈြသူသမီး ရညျးစားတှကေို အမွငျနဲ့ကွညျ့ပွီး အားမကသြငျ့ွေ ကာငျး ပွောပွလာ တာ ကို အခုလိုပဲ တှရေ့ပါတယျ။
“Fb ပျေါ သာယာနတေဲ့ RS တှေ ကွညျ့ပွီး အရမျးအားကမြနပေါနဲ့ ။ သူတို့ လ ညျး ဘာမဟုတျတာလေးတှနေဲ့ ရနျဖွဈစကားမြားကွတာပဲ။
ဒါပမေဲ့ သူတို့က ၂ကို ယျကွားပဲ ဖွဈတာ ။ FB ပျေါမှာလူသိရှငျကွားမဖွဈကွဘူး။ ဒါကရငျ့ကကျြမှုကိုပွတာ။ တဈယာကျနဲ့တဈယောကျတကယျဘယျလောကျပဲ ခဈြခဈြ မတူညီတဲ့ အကငျြ့စရိုကျနဲ့ အယူအဆေ တှေ ကွာငျ့ ရနျဖွဈစကားမြားမယျ။ ညှိနှိုငျးရမယျ။
ဖွေးဖွေးခငျြးတညျဆောကျရမယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပိုရငျးလာလေ ရနျပိုဖွဈလပေဲ။ ဒါ ကို အကောငျးဘကျကမွငျပွီးပွငျတတျဖို့လိုတယျ။”
သူဒီလိုမကွိုကျဘူး အိုခေ ဒါကိုငါနောကျမလုပျမိအောငျရှောငျရမယျ ) ဒါမြိုးပေါ့။ အဓိကက သ စ်စာ ရှိရှိနဲ့ နားလညျမှုတှရှေိနဖေို့ပဲ။ အကောငျးမွငျတတျရမယျ။
သူရဲ့ အရှိအတိုငျးကို လကျခံပေး နိုငျရမယျ။ လေးနကျတဲ့ စကားတှေ ခဏ ခဏ ပွောရမယျ။ နားထောငျပေးရမယျ။ နှဈသိမျ့အား ပေးရမယျ သစ်စာရှိရမယျ။
ယုံကွညျမှုတှတေညျဆောကျရမယျ။ တဈယောကျကိုတယောကျ အတ်တ မပါတဲ့ခဈြခွငျးတှကေ ခဈြသူ၂ယောကျစလုံးကို ပိုလို့အေးခမျြးစပေါတယျ။ စာကွှငျး (သူနဲ့ ညက ရနျဖွဈတယျ၊ ဒီမနကျ ၉နာရီလောကျမှာ ပွနျတညျ့သှားတယျ) #ခဈြမှုရေးရာ #RSရေးရာ အ ဖွာဖွာ ဆိုပွီး သူမသိထားသမြှကို တဈခုမကနျြပွောလာပါတယျ။
အသေငျခြိုဆှကေတော့ သူမကိုယျတိုငျလညျး အခဈြရေးတဈခုကို လကျရှိမှာ တညျေ ဆာကျထားသူမို့ သာယာတဲ့ အခဈြရေးတဈခုကို နားလညျမှုတှနေဲ့ ရှဆေ့ကျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြသူသမီးရညျးစားတှအေတှကျ အသေငျခြိုဆှပွေောတာလေးေ တှက တကယျကိုမှနျတဲ့စကားလေးတှပေါပဲနျော။
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေကတော့ အဆိုတော်တစ်ေ ယာက်အဖြစ်သာမက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပါ အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
အေသင်ချိုဆွေက လက်ရှိမှာတော့ သမီးလေး Ivy ကို ပြုစုပျိုးထောင်နေရ င်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေသလို သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း‌တွေကိုလည်း အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတာ နဲ့အမျှ အချစ်ရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အရင်ကထက် စဉ်းစားချ င့်ချိ န် တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အေ သင် ချိုဆွေက ဒီကနေ့မှာလည်း လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ သာယာနေတဲ့ ချစ်သူသမီး ရည်းစားတွေကို အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီး အားမကျသင့်ြေ ကာင်း ပြောပြလာ တာ ကို အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။
“Fb ပေါ် သာယာနေတဲ့ RS တွေ ကြည့်ပြီး အရမ်းအားကျမနေပါနဲ့ ။ သူတို့ လ ည်း ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်စကားများကြတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့က ၂ကို ယ်ကြားပဲ ဖြစ်တာ ။ FB ပေါ်မှာလူသိရှင်ကြားမဖြစ်ကြဘူး။ ဒါကရင့်ကျက်မှုကိုပြတာ။ တစ်ယာက်နဲ့တစ်ယောက်တကယ်ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ် မတူညီတဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ အယူအဆေ တွေ ကြာင့် ရန်ဖြစ်စကားများမယ်။ ညှိနှိုင်းရမယ်။
ဖြေးဖြေးချင်းတည်ဆောက်ရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုရင်းလာလေ ရန်ပိုဖြစ်လေပဲ။ ဒါ ကို အကောင်းဘက်ကမြင်ပြီးပြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။”
သူဒီလိုမကြိုက်ဘူး အိုခေ ဒါကိုငါနောက်မလုပ်မိအောင်ရှောင်ရမယ် ) ဒါမျိုးပေါ့။ အဓိကက သ စ္စာ ရှိရှိနဲ့ နားလည်မှုတွေရှိနေဖို့ပဲ။ အကောင်းမြင်တတ်ရမယ်။
သူရဲ့ အရှိအတိုင်းကို လက်ခံပေး နိုင်ရမယ်။ လေးနက်တဲ့ စကားတွေ ခဏ ခဏ ပြောရမယ်။ နားထောင်ပေးရမယ်။ နှစ်သိမ့်အား ပေးရမယ် သစ္စာရှိရမယ်။
ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ရမယ်။ တစ်ယောက်ကိုတယောက် အတ္တ မပါတဲ့ချစ်ခြင်းတွေက ချစ်သူ၂ယောက်စလုံးကို ပိုလို့အေးချမ်းစေပါတယ်။ စာကြွင်း (သူနဲ့ ညက ရန်ဖြစ်တယ်၊ ဒီမနက် ၉နာရီလောက်မှာ ပြန်တည့်သွားတယ်) #ချစ်မှုရေးရာ #RSရေးရာ အ ဖြာဖြာ ဆိုပြီး သူမသိထားသမျှကို တစ်ခုမကျန်ပြောလာပါတယ်။
အေသင်ချိုဆွေကတော့ သူမကိုယ်တိုင်လည်း အချစ်ရေးတစ်ခုကို လက်ရှိမှာ တည်ေ ဆာက်ထားသူမို့ သာယာတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကို နားလည်မှုတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူသမီးရည်းစားတွေအတွက် အေသင်ချိုဆွေပြောတာလေးေ တွက တကယ်ကိုမှန်တဲ့စကားလေးတွေပါပဲနော်။
ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
အေးမွဖွူလေးနဲ့အတူ Duet Song လေးတဈပုဒျဖနျတီးသှားမယျ့ ဘငျဂမြငျဆုမျး…
Facebook စာမကျြနှာမှာ “အပွုံးလေးနဲ့ဆိုတော့ အမုနျးမပေးနဲ့နျော….” ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့ အသညျးယားစရာပုံလေးတှတေငျပေးလာတဲ့ ဖွူဖွူထှေး…